theZOMI: [mrsorcerer:37463] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၄-၃)
[mrsorcerer:37463] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၄-၃)
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၄-၃)
လူသေအလောင်းအား တူးဖော်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာမှ လူပျောက် ဖွင့်လှစ်ရှာဖွေနေသူဖြစ်ကြောင်းသိရ
NLD ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီဖွဲ့
ရန်ကုန်အမျိုးသား သွေးဌာနမှာ လူနာတွေအတွက် သွေးလိုအပ်နေ (ရုပ်/သံ)
လူနည်းစုများကို ကာကွယ်ပေးရန် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အဆင့်မြင့်ဆုံး တရားရုံးက အမ်ိန့်ထုတ်
ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် လသား ကလေးငယ် ဓာတုအဆိပ်သင့်
ရပ်ကွက် ၃ခု စစ်တပ်သိမ်းခဲ့တဲ့အပေါ် သင်္ဃန်းကျွန်းမှာ ဆန္ဒပြ (ရုပ်/သံ)
ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် ဒုသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း တွေ့ဆုံ
PNO သိမ်းထားတဲ့မြေတွေ ပြန်ပေးဖို့ တောင်းဆို
လွှတ်တော်တွင်း တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေခြင်းကို သမ္မတရှင်း
မတ်လ(၄)ရက်နေ့ ထုတ် Weekly Eleven News Journal အတွဲ ၈ အမှတ် ၂၂
မတ်လ(၄)ရက်နေ့ ထုတ် Mobile Guide Issue 94
မတ်လ(၂)ရက်နေ့ ထုတ် Techspace နည်းပညာဂျာနယ် Volume 1 - Issue 49
ပါကစ္စတန် ကားဗုံးကွဲမှု ၄၅ ဦးသေဆုံး
မတ်လ(၅)ရက်နေ့ ထုတ် Digital Life Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ် - ၄၄
၁၂ ဘီးယာဉ်အား ဆိုင်ကယ်မှကျော်တက်စဉ် တိုက်မိ၍ ၁ ဦးသေ၊ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ
Posted: 04 Mar 2013 05:02 AM PST
၁-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၄၁၅ အချိန် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နောင်မွန်ကျေးရွာနေ ဦးကွေးမြင့်(၃၂)နှစ်သည် နောင်မွန်ရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ၁၁-၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၆၀၀ အချိန်ခန့်တွင် ၎င်း၏အစ်ကိုဖြစ်သူထံဦးကွေးချန်(၃၅)နှစ်သည် နောင်မွန်ကျေးရွာရှိ နေအိမ်မှ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲ လည်ပတ်ရန်---
Posted: 04 Mar 2013 04:45 AM PST
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၏ ဗဟိုညီလာခံသို့ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ တက်ရောက်လာမည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို မှန်ကန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိစိစစ်ရန် ဗဟိုညီလာခံ စိစစ်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ယင်းပါတီ၏ ဗဟိုကော်မတီဝင် ----
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီး၏ ဗဟိုညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ဗဟိုကော်မရှင်မှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
ရန်ကုန်အမျိုးသား သွေးဌာနမှာ လူနာတွေအတွက် တစ်လကို သွေးပုလင်း အနည်းဆုံး ၃၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀အတွင်းလိုအပ်နေတယ်လို. သိရပါတယ်။ ဒေါ်ညိုမာသက် ကသတင်းပေးပို.ထားတာပါ ။---
ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိ်ပ်ပါ
Posted: 04 Mar 2013 04:15 AM PST
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ရှိ လူနည်းစု လူမျိုးများကို အကာအကွယ် ပေးရန် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အဆင့်မြင့်ဆုံး တရားရုံးက ယမန်နေ့က အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ တရားရုံး၏ အမိန့်တွင် အစိုးရ အနေဖြင့် လူနည်းစုများ၏ လုံခြုံရေး အပါအ၀င် သူတို့ နေအိမ်များနှင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကို ချက်ချင်း ကာကွယ်ပေးရမည်ဟု တောင်းဆိုထားသည်ဟု ဆိုသည်။---
ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူ ဖြစ်ပွားနေစဉ်။
ပြာပုံ အတိ ဖြစ်နေသော ဟိန္ဒူမိသားစုများပိုင် အိမ်များ။
Posted: 04 Mar 2013 03:56 AM PST
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ် ကပျဉ်ရိုကျေးရွာ၊ ဓမ္မာရုံကျောင်းလမ်းနေ ဦးသိန်းညွှန့်ဦး၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး တို့၏ လေးလသားအ ရွယ်ကလေးငယ်မှာ အိမ်ဘေးကြက်ခြံမှဖြန်းသည့် ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် ဓာတုအဆိပ်သင့်မှုဖြစ် သည့် လက္ခဏာရှိကြောင်း ဆရာဝန်မှ မှတ်ချက်ချ ပြောဆိုခဲ့သည်။---
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးစ ၁၉၉၁မှာ တပ်ပိုင်မြေဆိုပြီး သိမ်းယူခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရပ်ကွက်၃ခုနေ ပြည်သူတွေက မြေနေရာပြန်ပေးဖို့ မတ်လ ၄ရက်နေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း နခွန်စ၀မ်မြို့မှာ မြန်မာအချင်းချင်း ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ မိန်းကလေးငယ် ၂ ဦးကို ထိုင်းရဲတွေက ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းသတင်းဌာနမှာ ဖော်ပြသွားပါတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးကို ဘတ်ငွေ တသိန်း ၂ သောင်းနဲ့ လာရွေးဖို့ ခြိမ်းခြောက်ထားကြောင်း ဘန်ကောက်ခရိုင် ခလောင်းတေမြို့က ---
Posted: 04 Mar 2013 02:55 AM PST
မတ်လ ၂ ရက်နေ့က မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်စတင်ခဲ့တဲ့ ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Sergei Shoigu ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဒီနေ့ ဒုသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်းနဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှား ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဟာ ဒုသမ္မတ ဦးဥာဏ်ထွန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်းတို့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ----
Posted: 03 Mar 2013 09:50 PM PST
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပအို့ဝ်အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်(PNO)က သိမ်းယူထားတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ထီဖောင်းနဲ့ ဖာမွန်းကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ ဥယျဉ်ခြံမြေတွေကို ပြန်လည်ရရှိ ရေးအတွက် ဒေသခံတွေက နားဘောင်ဒေသ၊ ထီဟန်ဆွေးကျေးရွာမှာရှိတဲ့ PNO ရုံးမှာ မနေ့ မနက်ပိုင်းက သွားရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ်။ ---
Posted: 03 Mar 2013 09:34 PM PST
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် သမ္မတမှ ခန့်အပ်ထား သူဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်အတွင်း တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေခြင်းသည် တိုင်းပြည်၏ သမိုင်းကြောင်း နောက်ခံ အခြေအနေ များအရ လတ်တလော အခြေအနေတွင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန်သာ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားသည်။ ---
သမ္မတဦးသိန်းစိန် နှင့် ဖင်လန်သမ္မတ H.E. Mr. Sauli Niinisto
Posted: 03 Mar 2013 08:24 PM PST
Posted: 03 Mar 2013 08:21 PM PST
Posted: 03 Mar 2013 08:19 PM PST
ပါကက်စတန် နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကရာချိမြို့မှာ ဗုံးတလုံး ပေါက်ကွဲခဲ့လို့ လူ ၄၅ ယောက် သေဆုံးပြီး ၁၅၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ရှီအိုက်မူစလင် အများစုနေတဲ့ ရပ်ကွက်တခုက ဗလီတခုမှာ ဝတ်ပြုသူတွေ ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုပြီး ပြန်ထွက်လာချိန် ဗလီအပြင်မှာ ပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ ရဲကပြောပါတယ်။ ---
ကရာချိမြို့က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာ နေရာ။ (မတ်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၃)။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံက မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ လုပ်ခလစာ တိုးတောင်းလို့ ကုမ္ပဏီနဲ့ အချင်းများနေတဲ့ အထည်ချုပ် စက်ရုံဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက နာမည်ကျော် ဖက်ရှင် အ၀တ်အထည် လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ အပ်ထည်တွေကို လက်ခံ ချုပ်လုပ်ပေးတဲ့ စက်ရုံတရုံ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီမှာ စနေနေ့က မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အရိုက်ခံရ တဲ့ဖြစ်ရပ်ကို ဒေသဆိုင်ရာ ဂျော်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး အစ္စရေးလ်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကလည်း ဆက်သွယ်လာပြီးတော့ ဘယ်လိုအကူအညီပေးရမယ် ဆိုတာ မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တဦးက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
"The North Face ဆိုတာက ဒီ CMJ စက်ရုံတရုံလုံးမှာရှိတဲ့ အကြီးမားဆုံးအော်ဒါ တခုပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ Laurel၊ Calvin Klein CK ။ ပထမဦးဆုံး အဓိက ထားပို့တာ U.S.A ပေါ့နော်။ အဓိကထားပို့တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကနေဒါကို ပို့တယ်ခင်ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ ကာတာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်ကို ပို့ပါတယ်။ အဲဒီ ၅ နေရာကိုတော့ အဓိကထားပြီး အများဆုံးပို့ပါတယ်။"
"သေချာကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်တဲ့သူကို ထုတ်မပေးပါဘူးခင်ဗျ။ အဲဒီလူတွေ အကုန်လုံးထားပြီးတော့ တခြားသူတွေကို ထုတ်ပေးတယ်။ ဒီမှာ အရိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေက ရိုက်တာသူတို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါကျတော့ စက်ရုံက တကယ်ရိုက်တဲ့သူတွေ မရှိပါဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီလူတွေက စက်ရုံတွင်းထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ။ အပြင်ကို မသွားကြပါဘူး ဆိုပြီးတော့ သူတို့က လိမ်ထားတာပေါ့။ အဲဒီမှာ ရဲစခန်းမှာရှိတဲ့ ဒုရဲအုပ်တယောက်က ဒီကိုလိုက်လာပြီးတော့ သေသေချာချာ ရိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံ ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိပါတယ်လို့၊ အဲဒီဓာတ်ပုံနဲ့ အတူတကွ လာမှရမှာပါလို့ ကျနော်တို့က အဲဒီလိုပြောတော့ ကျနော်တို့က လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေကို ယူသွားပြီးတော့ မနက်ဖြန်ကျရင် သူတို့တခါ ပြန်ဆင်းလာမယ်ပေါ့နော်။ ဒီဓာတ်ပုံထဲက လူအတိုင်းကို စက်ရုံထဲမှာဝင်ရှာမယ်ပေါ့။ ၀င်ရှာပြီး ရှိတဲ့သူကို တခါတည်း ဖမ်းပါမယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ကို အဲဒီလို ပြောသွားပါတယ်။"
"ကျနော်တို့ တလပိုင်းမှာ ရစရာရှိတဲ့ ဘွန်းနက်စ် ပိုက်ဆံတွေပေါ့နော်၊ အဲဒီဘွန်းနက်စ် ပိုက်ဆံတွေကို လိုချင်ပါတယ်လို့။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ၂ လပိုင်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျနော်တို့ အလုပ်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီအလုပ်ဆင်းခဲ့တဲ့နေ့တွေက ရရမယ့်ကြေးတွေရယ်၊ အိုဗာတိုင်ကြေးတွေရယ်၊ ဘွန်းနက်စ်ကြေးတွေရယ်ကို ကျနော်တို့ လိုချင်ပါတယ်လို့ သူတို့ဆီကို ပြောခဲ့ပါ တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ စက်ရုံမှာရှိတဲ့ တဦးချင်းစီမှာ စုကြေးငွေတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီစုကြေးငွေတွေရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ နှစ်အလိုက်ရရှိတဲ့ သူတို့ဆီကပေးတဲ့ငွေတွေရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ရစရာရှိတဲ့ နစ်နာကြေးတွေကို ကျနော်တို့ လိုချင်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ ဒီစက်ရုံကနေပြီးတော့ ကုန်ကျစရိတ်ခံပြီး ပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ကို ယူပြီးတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ချင်ပါတယ်လို့။ အဲဒါ ကူညီပေးပါလို့တော့ သူတို့ကို ကျနော် ပြောပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။"
၂-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၀း၀၀ နာရီ လောက်က ဇမ္ဗူသီရိ၊ ဘောဂသိဒ္ဓိ ရပ်ကွက် ရှိ မြ၀တီ ဓါတ်ဆီ ဆိုင် အရှေ့မှာ ယာဉ်တိုက်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ Van အဖြူရောင် ကားနံပါတ် ၆ခ/၁၂၀၀ ကို မောင်းနှင် လာတဲ့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒု- ညွှန်မှူး ဦးမျိုးဝင်းဟာ အရက် အလွန် အကျွန် မူးနေပြီး၊ ----
Posted: 03 Mar 2013 09:53 AM PST
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဆူပူ အကြမ်းဖက် မူတွေ ပေါ်ပေါက် နေတဲ့ အတွက် ဘင်္ဂလားဒေရ်ှကို ရောက်ရှိ နေကြတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ စားဝတ် နေရေးနဲ့ လုံခြုံရေး အတွက်ပါ အထူး စိုးရိမ် နေရပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ မဟာမင်းကြီး UNHCR ရုံးက မြို့ပေါ် ဒုက္ခသည်တွေ အဖြစ် အသိ အမှတ်ပြု ထားတဲ့ ---
ကြာသပတေးနေ့က စတင်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် ဆန္ဒပြမှုတွေ နိုင်ငံ တလွှား ပျံ့နှံ့
Posted: 03 Mar 2013 09:44 AM PST
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုကာလ ၁၉၇၁ က လူသတ်မှု၊ မုဒိမ်းကျင့်မှု၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု စတဲ့ ပြစ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဂျာမတ် အီး အစ္စလာမ်မီးပါတီ ခေါင်းဆောင် ဒဲလ်ဝါ ဟူစိန် ဆာရီဒ်အီကို ကြာသပတေးနေ့က သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ သေဆုံးသူ ၆၀ အထိ ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။---
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး အခြေခံတဲ့ အစိုးရ ဆန့်ကျင် ဆူပူမှုတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်နေပါတယ်။
Posted: 03 Mar 2013 09:36 AM PST
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆင်စွယ်ကုန်ကူးမှု ပပျောက်ရေး လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလက်ရှင်နာဝပ် က ကတိပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီ ဆင်စွယ်ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုကို ရပ်တန့်စေရေးအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ---
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၊ အာမန်မြို့တော်အနီး CMJ အထည်ချုပ်စက်ရုံက မနေ့က ဆန္ဒပြမှုမှာ အကြမ်းဖက်ခံရပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး (၄) ဦး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသူ ရှေ့နေနဲ့ စက်ရုံ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေကြောင်း သိရပါတယ်။--
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အာမန်မြို့တော်အနီး CMJ စက်ရုံတွင် ဆန္ဒပြနေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေပုံ
Posted: 03 Mar 2013 09:25 AM PST
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာက လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ရွာသားတချို့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မြင်းခြံထောင်မှာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံနေရတဲ့ ဆရာတော် ဦးကောသလ ကို ---
နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာက လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ ပဋိပက္ခ ။ ဓါတ်ပုံ - မေပုပ္ပါး
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်ကနေ လိုင်ဇာမြို့ကို လမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ အဖွဲ့မှာ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းသူတွေ ပိုများလာပြီး ဒီကနေ့ သံဃာတော် (၂) ပါး ခြေထောက်ဒဏ်ရာ ရရှိတဲ့အတွက် မြစ်ကြီးနားဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။---
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့အထိ လမ်းလျှောက်တဲ့အဖွဲ့မှ မြစ်ကြီးနားဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ကို တွေ့ရစဉ် ။ photo: RFA/Kyaw Myo Min
၂-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၈၃၀ အချိန် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်သွားကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်(၃/၂-၃)ကြား၊ ကျောက်စခန်းကျေးရွာအနီးတွင် မိုးမောက်မှ လွယ်ဂျယ်သို့ ဗန်းမော်မြို့နယ်၊ ပေါက်ကုန်းရပ်နေ တင်စိုးကျော်(၄၃)နှစ် မောင်းနှင်လာသည့် နီဆန်း(၁၂)ဘီးယာဉ်အား ----
Posted: 03 Mar 2013 08:44 AM PST
၂၆-၂-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၉၃၀ အချိန် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ လုံးခင်းအုပ်စု၊ ရပ်ကွက်(၁)နေ ဦးဖိုးထူးပိုင် မုံယိုနေသောဆင်(မိုးပုလဲ)မှ ဒကိ်္ခဏနဒီ မြသိန်းတန်ရှင် ပေါ်တော်မူ ဘုရားသို့ သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဖူးမြော်ရန်သွား ရောက်သည့် နမ့်မဖြစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မလန်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ----
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 3/05/2013 10:12:00 AM